TSY AZO IADIAN-KEVITRA INTSONY NY FIVERENANA SY FILATSAHAN’NY FILOHA RAVALOMANANA – MyDago.com aime Madagascar
Mitohy hatrany eny amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka androany ny hetsiky ny vahoaka mpomba ny Ankolafy Ravalomanana. Ny mpikambana ao amin’ny kongresin’ny tetezamita Ernest avy any Antsirabe dia nanambara mitovy amin’ny voalazan’ny soratra masina izay namakivakian’ny zanak’Israel ny tany an’efitra tao anatin’ny efapolotaona ny tolona ataontsika. Zavatra sarotra no nisy tamin’izany hoy izy kanefa tafita ihany. Ny antsika hoy izy mbola kely lavitra noho ny efapolo taona, noho izany dia mahereza isika. Nanambara ihany koa ny tenany fa ny zanak’idada dia mpankato raiamandreny, ka izay lazain’izy ireo ihany no arahina. Tonga ny fotoana hoy izy hifankatiavantsika, sy hifanampiana fa ho avy i dada. Nanentana ny vahoaka ny tenany mba ho tonga maro eny an-kianja ho fanohizana ny tolona. Ny CT Ralaiseheno Guy Maxime dia nitondra ny fandaminana ho an’ny hetsika rahampitso. Mandritra ny ora iray hoy izy dia hisy ny fanompoam-pivavahana atao eto an-kianja ho fitondrana am-bavaka ny fihaonana eo amin’ny filoha Ravalomanana sy Andry Rajoelina, izay hotanterahina any Seychelle ny Talata 24 Jolay izao. Ireo tomponandraikitra hoy izy dia hanana anjara rojom-bavaka amin’io fotoana io. Noho izany dia ilaina ny fanajantsika ny fitsipika satria mahamenatra hoy izy ny tsy fiverenantsika amin’ny ara-dalàna. Ao anaty fotoana herinandro hamaritra zavatra maro ho an’ny firenena isika hoy ity mpanao politika ity, manomboka rahampitso. Isika hoy izy dia aoka tsy hanome lalana ny tsy marina eto fa aoka mba ho ny fahamarinana no hanjaka eto, izay no nandaniantsika fotoana teto. Tsy diso anjara tamin’ny fanentanana ny tsirairay handresy lahatra ny manodidina ny tenany ho hotonga maro rahampitso amin’ny fanatevenana ny tolona. Andriamatoa Mektoub dia nilaza fa tsy azo iadian-kevitra intsony ny fiverenan’ny filoha Ravalomanana sy ny filatsahany ho fidiana. Tsy ekena hoy izy raha mbola izay no ataon-dRajoelina amin’io fihaonana amin’ny Talata any Seychelle io.
Ny mouvance Zafy dia tsy manaiky intsony an’ i Andry ho filoha
Auteur Solo Razafy*Publié le 20 juillet 2012 20 juillet 2012 Catégories Politique
10 réflexions sur « TSY AZO IADIAN-KEVITRA INTSONY NY FIVERENANA SY FILATSAHAN’NY FILOHA RAVALOMANANA »
tsy tokony ho nanaiki2 fahatany io fihainana HAFAHAFA io mihintsy
i dada fa aiza ilay fitakiana fa eto an-toerana e!!! nandamoka koa ve???
sao dia be loatra izay nandamoka izay ?efa hita fa tetika tsy HIDIRAn’i dada ao Dago intsony io dia tsy nsy
mba nanohitra ve????mahonena ilay GASY hoy ilay olona iray izay,fa dia inona loatra rė e!!!!
Fa inona ary ity ? Tena miala tsiny aho aloha fa tsy dia naharaka loatra, fa ny marina……amiko, dia mitovy hevitra amin’i Elas ihany aho aloha e ! Tsy misy fanambaniana velively fa rehefa vandana tokoa dia kary !!!
Voalohany mba manome rariny an’i Rainitay faly dia faly amin’izao aho. Ny Rainitay dia Rainitay ihany !!!
Ny mampalahelo dia efa samy miady mafy ka samy efa misy nervosité, kanefa na izany aza tsy tokony ho toy izao no fihetsika.
Toy ilay Mpitsara ampiasain’i Domelina e (David Erlight) Rehafa vendrana sy voavidy ny Mpitsara ao an-toerana dia ny Mpitsara(….PRIVé tsy mahalala na inona na inona no antsoina satria ….vazaha ). Rehefa gasy dia tsy misy vidiny eo imason’ny gasy vendrana sy Mpamadika !
Tokony mba misitaka kely daholo dia misaina aloha angamba ???
21 juillet 2012 à 10 h 46 min
Nataonay @ fiara ny antsoina hoe « King’s Road » any Jordanie:Efa taonjato fahagola be, tsy nomeny mpanjaka tompontany izany faritra izany alalàna,handray hitsin-dalana ho raisin’izany Abraham izany,ka dia namakivaky tany karakaina sy « relief afakely e »!… »Programme » sy « feuille de route » ndry zareo fahagola be izany ka ny tohiny dia izao fidongin’ny firenena israelien ny tany izao anefa teo Nebo, izany Mosesy dia maty fa tsy tonga t@ izany tany notilina.
Ny tiako lazaina dia tantaran’olona afa izany ka dia ho ampiraisina @ izao baiboly ve ny mianjady @ gasy dia…hitondra vaha olana e?
– Ny paikany mpanjanaka anefa toa hoe tsy avela hilatsaka ho fidina na ny filohantsika M. Ravalomanana na ilay jiolahy mpangalatra fitondrana io:
Izany hoe efa hitandry zareo « vahiny mitondra sy mitantana » ny firenena malagasy, ny fomba hametrahan @ izay ny saribakoly vaovao hanampy andry zareo hanapotika ny malagasy.
Tara foana ihany « ra-galasamy », « super naif » sa mpivavaka loatra ss tena tsy mba manana « stratégie de défense » e???? Mahonena loatra an!
Izao no tena hoe « aza manody » an!
– « Ahoana ny fiantso ny mponina any Madagascar »???
– « Madagascarien » hoy ilay zalahy « look décérébré izany » ary » Indien » hoy ilay kala même genre)…Zapping/tv frantsay no namoaka io ity Juillet!!!!
– dia… « amen » hoy ny mpitondra fivavahana…..
Ka ahoana ry Tahiry,Kintana, Ranavalona sy Fidy Ravelojaona no atao fa tsy manana afa tsy M.Ravalomanna, iny tokana iny anie isika e!
21 juillet 2012 à 10 h 57 min
HEVITRO manokana ity !
Isika Mpitolona aloha dia toy ny olon-tsotra ihany ka
IZAY ATAON-DRIZAREO dia hiatra amintsika na inona hivoaka eo na inona !!!
Fa izahay kosa ato : http://lafy8.forumactif.ca/t188p30-retour-inconditionnel-du-president-dernierement-elu-marc-ravalomanana
dia mihevitra ary MAMPORISIKA ny GTT Hifanatona, na anio na rahampitsoa, na rehefa afaka folo taona aza, ka hitambatra ho hery iray, ary HO ANTOKO POLITIKA fa tsy FIKAMBANANA intsony.
Raha tanteraka izany dia ho raitra kokoa ny fomba entina mitolona .
21 juillet 2012 à 11 h 02 min
Efa lasa any @ na resaka baiboly ihany izy ity ry « randry » dia aleo ataon-dry zalahy amin’ny vavaka fotsiny ka na ho ela na ho aingana ve tsy hivaha eo ihany ny olana e!!!
Asa na coîncidence na ahoana fa tena ao @ patsana tsara ilay expression’i RAVALOMANANA hoe « minoa fotsiny ihany »,dia nihino tokoa ra-Malagasy fa na dia tokony hitolona aza dia manao ariary zato am-pandriana fotsiny.
Ny president RAVALOMANANA ihany aloha no sisa antenain’ MADAGASIKARA,kanefa ilay tetika ahatongavana amin’izany toa tsy hay izany !!!!
Vao efa-taona latsaka, ka tsy tokony hitaraina ve ?
Ary, rehefa inona izay vao azo lazaina hoe vahoaka malagasy ? Ireny mpanafika Làmpam-panjakàna ireny ihany ve no azo lazaina fa hoe vahoaka ?
Tokony hajanona hatry ny ela hoy aho ity resaka zanak’i Dada ity, satria tsy izay tonga ao amin’ny Magro ihany no tan-dalàna sa maniry ny fiverenan’ny Filoha Ravalomanana !
Raha tsy nijanona tao amin’ny Magro foana ny mpitaky ny ara-dalàna indrindra fa ireo mpitarika, tsy ho toy izao no fandehan’ny tantara. Impiry moa no nisy resaka hoe hivoaka an’io kianja io kanefa dia nofehezina tsy hiala avy tao ny olona ? Matahotra ve hoe sao dia rava ilay FDR ?
Ny nataon’ny mpanongana atramin’izay ve dia tena hoe fanarahana an’ilay tondrozotra ?
Teo amin’ilay Accord de maputo dia efa betsaka ny lesoka ! Iza no nanosika ny Prezidà Ravalomanana nanaiky an’io, ary nahatonga ny Accord de Cotonou voahitsakitsaka ?
Ny mahagaga anefa dia toa io Accord io ihany koa no mbola nahatonga an’i Madagasikara hiaran’ny sazy amin’izao fotoana !
Tsy maintsy mihaina amin’ny zavatra « voatefitefy mora sy zara-fa-vita » foana ve ny malagasy ? Efa nisy fotoana izay nahafaly ny mijery fa mba misy tsara izany VITAGASY izany, fa dia miverina indray izao ny kitoatoa !
Nangataka ary nanome baiko mihintsy aza ny Fikambanana iraisam-pirenena, nilaza hoe tokony mihaona sy mifampiresaka ny Filoha sy ilay mpanongan’azy.
Fanontaniana mipetraka : Inona no zavatra azo antenaina sy TOKONY ANDRASAN’NY VAHOAKA MALAGASY ???
Alefaso ny hevitrareo, fa misy milaza fa mamaky izay hetaheta voasoratrareo izy !
Na dia eo aza ireo « mpiara-dia » aminy sy ny heviny manokana, miandry ny fanirianareo izy !
Mandeha mantsy ny resaka fa hoe ny tsy hilatsahany ho fidiana no ho votoanton-dresaka ho atao any !
Ilay mpanongana tsy mahazo milatsaka dia rariny, fa raha izy kosa..ahoana ?
« Ahondreo ny loha, hakimpio ny maso, mivavahà,hoy ny fotsy mpangalatra tany tamin’ireo « indiens » tompon-tany dia.. »amen » ary ny baiboly no sisa an-tanany « indiens » ary ny tany kosa an-tanany fotsy bekintana! « Guide taranaka Navajo-Grand Canyon » no nilaza io t@nay touristes fa anga nahamenatra akory ny bekintana fotsy nahare izany!
Toy ny tsy mbola ampy izany lesona, satia tantara tsy lazainy baiboly, fa dia voagezany mpanjanaka tsara ka manohy mivavaka…FA MBA ASIO VOKANY afa aza re Tompko ô!e!Efa hatr@ nidirany colons no nivavaka dia hatrizao mbola mivavaka sy voa foana ihany… »recolonisation version..2009-après putsch » no zakaina ity.[(aleo tys lazaina hoe « sado-maso) sao ahazo « chantage fampitahorana avy @ mpivavaka].
Dia hiandry an’i razaka anie izany ry Fidy.R e!
Ary mety ho izany koa ry Tahiry ny sosokevitrao ahita ny GTT ho tonga antoko politika mba hihavahany filohantsika M.Ravalomana tokoa sa?
Naharesy ny frantsay sy bekintana ny vietnamiens satria nanana ny fomba fijery sy fiasa niompana indrindra @ fihazonana ny fisainan-drazany sy hambony manokana ka toy ny hoe « stratégies militaires et politiques » afa mihintsy e!
Isika malgasy sady tsy manaiky ho afrikana ary alavitra loatra ny Asia dia izao tsy antany tsy amparafara izao ka miafina ambadiky ny vavaka sy karazana fialan-tsiny sisa!
Ny variana mivavaka eo foan ary ny mpanondrana harena mankany Comores tsy mivavaka dia mahavita mamoka 60 kg volamena, omby sy harentsika malagasy afa koa…
Rah misy ny « FOI »,izay tsy misy hidirany kristianisma mihintsy, dia mahavita zavatra daholo isika tsirairay ary dia hiova ny fiainana.Fa io fampivorivorian–tsaina hampifangaro ny « foi » sy « religion » io no toa tena sarotra ho any maro sa?
Misaotra Njara tsy misorona miteny a!!mifona e!!
Diso tokoa aho, tsy mety mihintsy ny ataoko, mamela ahy .
3 andro sy 3 alina aho no nandinika mafy fa marina ilay voalazan’i Elas , marina koa ny voalazanao fa
samy sorisorena be ihany @ ‘ity fihaonana , izaho manokana dia tena manahy mafy sady mametraka
fanon-taniana hoe: inona no ambadik’izao zavatra losoka izao???tena miasa loha be amihntsy aho ka
tsy haiko na izay no mampisavoana mafy ahy toy izao??? fa MIFONA RĖ TOMPOKO o!!
23 juillet 2012 à 15 h 44 min
Aza mampiomehy tahak’izao rê ranavalona !! Samy manana ny heviny daholo izao !
Samy manao izay tiana daholo ihany koa ; ny sasany aza ny rafitrin’ny TIM mihintsy no tadiaviana haravona kanefa ilay sefo tsy eo !
Fa misy inona ihany e??tena fanina aho ry Kintana !!
Na izany aza tsy dia nety loatra ny nataoko fa misaotra anao aloha,
hay mba misy mpiaro ihany Bavy ??nisy zavatra nolazaiko Tary ambadika tary fa tsy hitanao angaha
fa nisavoana be aho ka rehefa nandinika aho avy eo vao tsapako fa marina ilay voalaza fa izaho no
nandray an-tendro be loatra.
Précédent Article précédent : Amin’ny Talata 24 Jolay atsy Seychelles ny fihaonana !
Suivant Article suivant : MANAMBINTANA NY FILOHA RAVALOMANANA